Indlela Yokukhumbula Iindlela Eziphambili Kwiingxabano Zengqondo
Ukucinga okubalulekileyo kubaluleke kakhulu - imihla ngemihla sijamelene neendawo ezininzi zamabango esiyidingayo ukuze sikwazi ukuvavanya. Kufuneka siqwalasele amabango ezopolitiko, amabango ezoqoqosho, amabango enkolo, amabango ezentengiso, njalonjalo. Ngaba ikhona na indlela abantu abangayifunda ngayo ukwenza umsebenzi ongcono kunye oqhubekayo? Ngokufanelekileyo, wonke umntu uya kufumana ingqiqo eqinileyo ekucingeni ngokucace ngelixa esesikolweni, kodwa akunakwenzeka.
Abantu abadala kufuneka bafunde indlela yokuphucula izakhono abanalo.
Ngomhla kaMeyi / Juni 2005 we- Skeptical Inquirer , uBrad Matthies unikezela indlela yokujonga iimfuno ezisekelwe ku-Wayne R. Bartz. I-CRITIC iyabuza:
Ulwazi oluxhasa ibango?
UMathethi uchaza indlela isinyathelo ngasinye esinokusebenza ngayo:
Uthetha ntoni umthombo wakho? Ingaba ibango lemvelaphi lixesha elifanelekileyo kwaye lifanelekileyo kumbuzo othile okanye ingcamango? Ingaba umthombo unikezele ibango ngendlela ecacileyo nengqiqo, okanye ngaba kukho ubungqina beelwimi ezikhuthazayo?
Ingaba umbhali wolwazi uchaneke ngokucacileyo? Ukuba kunjalo, ingabe ukuthembeka kwakhe kungasungulwa? Kwakhona, ngokusekelwe ekuhlolweni kwakho kwangaphambili kwebango, ngaba kukho na isizathu sokubhenkcela i-bias kwicandelo lombhali?
Ulwazi Ukuxhasa iBango
Yiyiphi inkcazelo eyenziwa ngumthombo ukubuyisela ibango?
Ngaba ingcaciso enokuqinisekiswa, okanye ngaba lo mthombo uthembele kubungqina okanye ubungqina be-anecdotal ? Ukuba lo mthombo ubonisa uphando lwangaphambili, ngaba umthombo uchaza indlela umbhali abuthe ngayo idatha? Ukuba imvelaphi yinqaku, ingabe icacisa izikhombisi kwaye ziyamkeleka? Ukuba umthombo uyigrama yendaba, ngaba iphephancwadi lihlolwa kwakhona?
Unokuvavanya njani ibango lakho umthombo? Ukuqhuba uphando lwakho oluthile okanye uphando (umz., Uphando lwentengiso, uhlalutyo lwamanani, ukucwangcisa uphando olwenziwa ngophando, njl.).
Ingaba omnye umthombo wolwazi ohloniphekileyo uvavanya amabango umthombo owenzayo? Ingaba lo mthombo unika inkxaso okanye uyayichasa ibango lokuqala? Emva kokuqhuba ukuhlaziywa kweencwadi, zithini iingcali malunga nebango? Ingaba iingcali zixhomekeke kwiingcamango zabo malunga nohlalutyo olunzulu kunye nokuvavanya, okanye ngaba zibonisa nje ngeengcamango ezincinane okanye zingekho ubungqina? Ngaphezu koko, ngaba iingcali ngokwenene ziyihloko, okanye zibonisa izimvo malunga nesihloko abangenakukwazi ukuxoxa ngazo?
Yintoni isiphelo sakho malunga nomthombo? Ukuqwalasela amanyathelo okuqala amahlanu e-CRITIC asebenzayo kumthombo wakho, yenza isigwebo: Ngaba lo mthombo kufanele usetyenziswe kwiphepha okanye ingxelo? Uvavanyo lwengcaciso lunokuba lukhulu kakhulu, ngoko kubalulekile ukuqwalasela yonke into eqinisekisiwe.
Amathebhu enza amanqaku amanqaku angentla apha. Le yonke imigaqo-siseko yokucinga engundoqo, ezininzi zazo zibonakala zikhohliwe ngabantu abaninzi. Abantu bangazibandakanya ngaphi na ukungazi kwaye bakuqonda kangakanani ukuba bafanele bayenze kodwa benqabe ngenxa yokuba iziphumo ziya kuba nzima?
Ngandlela-thile, i-mnemonic inokukunceda: iya kuqinisa into engazi kakuhle okanye ihlale ikhumbuze into ethile ekufuneka iyibale.
Njengoko sele kuphawuliwe, kwihlabathi elifanelekileyo ezinjalo izixhobo zamanemon aziyi kuba mfuneko kuba sonke siyafumana imfundo enhle ngendlela yokucinga ngokucokisekileyo ngenkathi sisesikolweni, kodwa nangona kunjalo, oku kunika indlela enomdla wokulungiselela nokulungisa indlela singakwazi ukufikelela kumabango. Nangona umntu esele elungile ekucingeni okucokisekileyo, into efana ne-CRITIC inokukunceda ukuqinisekisa ukuba inkqubo yokungaqiniseki iyahamba njengoko kufanelekile.
Izigqibo zeNkundla ePhakamileyo-Everson v. IBhodi yeMfundo
Amacandelo aSeko okuKhupha isakhiwo kwiKlasi
Kutheni Kukunzima Ukuqhekeza Isephaphu Ngamanzi Aphantsi?
Abafazi kwiTudor Dynasty
Isikhokelo sePaddleboarding ngokukhuselekileyo kwiBhodi
GRE Apps Apps Worth Download
Iimpawu zeeMidlalo eziMandla eziPhezulu zoLwandle oluPhezulu luka-1990
Ukuhlaziywa kweeNgesi kwiNqanaba eliPhakamileyo lwabaFundi
Amazwi angama-10 okuphephe ukuBhala ngokuBhaliweyo
Ukuhamba ngeSomandla soMbane: i-Oort Cloud